सङ्लो नदी तर्दा जतिको आनन्द मैले कहीँ पाइनँ । भर्खरै उदाएको घामको कोमल किरण जति खुसी अरु कोही देखिनँ । रुख पात वनबुट्टा र सल्लाघारीलाई स्पर्श गर्दै महकिदै आएको शीतल बतासमा जति शान्ति मैले अन्त भेटिनँ । चराहरु जति नजिकका साथी मेरा अरु कोही भएनन् । पहाडी उकालोमा गहिरो श्वास फेर्दै हिँड्नुमा जति आनन्द मलाई कहीँ मिलेन । नीलो आकाशमा अपलक हेरेर एक्छिन एक्लै टोलाउनु जतिको प्रशन्नता अरु केमा पाइन्छ होला र ! शरदको शीतल जुन जस्तै पर पर पल्लो गाउँतिर बज्दै गरेको मालाश्री धुनमा जति रमाइलो अरु कुनै गीतमा पनि मिलेन । यो शरदको शारदीय बिहान कहिले नअस्ताए हुने । घामले चुमेको पहाडहरुमाथि कहिले रात नपरे पनि हुने । हिमालबाट बग्दै हेलिदै आएकी त्रिशूली किनारमा बसी जिन्दगीका खुसीका अमृतमय आँसु अलिकति मिसाएँ मैले पनि । यो उल्लास उमंग, यो चहलपल यो निःशब्द निनाद, यो घनघटा यो साउती तिमीसँग गरिरहन पाऊँ प्रकृति । रुदामा पनि तिमी हाँसिरहे जस्ती । नयाँ दुलही जस्ती हरियो वनको घुम्टो ओढेर लुकिलुकी हेर्छ्यौ मलाई । मानिस दुःखी र सुखी त आ–आफ्नै सो चाहिँ र संस्कारबाट नै प्राप्त हुने त होला । म देख्छु कति गरिब परिवार कति धेरै रमाएर जिन्दगीको उकाली ओराली खुसी र आनन्दले पार गर्दैछन् ।
मैले देखेको छु एउटा गरिब तर सुखी परिवार हाम्री गाउँकी पाकु दिदीको ।
तपाईंहरु कसैले पत्याउनुहुन्न होला है ! कि पाकु दिदीले लेकमा घाँस जाँदा बच्चा जन्माएर डोकोमा हालेर ल्याउँथिन् भन्ने !
विश्वका महानतम गरिब मान्छेमध्ये पाकु दिदी पनि एक थिइन् ।
अस्पताल र ओखति के हो थाहा छैन पाकु दिदीलाई । सुत्केरी भनेको के हो ? सुतक भनेको के हो ? सुत्केरीले मीठो मसिनो ज्वानाको झोल घ्यू खानुपर्छ भन्ने थाहा छैन पाकु दिदीलाई । तिनको लोग्ने (लोकते दाइ) पाकु दिदीमाथि केवल उक्लिन्थे मात्रै उक्लेपछि बच्चा भइहाल्ने कुन श्राप परेको हो कुन्नि यी दुई जोइपोइलाई भन्थे गाउँलेहरुले । तर ! ती चाहिँँ भने सधैं मुस्कुराएको देखिन्थे । अचम्म त त्यो थियो कि हरेक छाक पिठो वा चामल उनीहरू पैंचो लगेरै पकाउँथे । अनि जुन घरबाट खाने अन्न लिएर जान्थे त्यही घरको खेतबारीमा काम गर्न हाजिर हुन्थे । जुन श्रमलाई तिनले पुजा गर्थे त्यही श्रमलाई गाउँका ठूलोठालो पल्टनेहरु भन्ने गर्थे यिनीहरूलाई कसको श्राप परेको होला ?
एउटा गज्जबको बानी थियो लोकते दाइमा ।
पाकु दिदी बर्सौंटे थिइन् । मेरो मतलब वर्षैपिछे बच्चा जन्माइरहने । दिनभर मजदुरी गर्थे बूढाबूढी  । बेलुकी अलिकति झुम्म लाग्ने तिनपाने लगाउँथे । गाउँमा बेलुकीको खाना ६ बजे तयार हुन्छ । खाना खाएपछि जाडो महिना छ भने अँगेनामा आगो ताप्ने, गर्मी महिना छ भने लामखुट्टे धपाउने गुइठा सल्काउने अनि सुत्ने । दिनभरको थकाइले निद्रा पनि कहाँ राम्रो आउँछ र अनि तीन पाने पियो एकिछन मात्तियो, एकिछन तात्तियो सुत्यो । यसैगरी पाकु दिदीले चार छोरी जन्माइसकेकी थिइन् । मेलापात घाँस दाउरा जाँदा अरु लोग्ने मान्छेसँग पनि जिस्किन्थिन् तिनी । उन्ले सोचेकी थिइन् पुरुष भनेका त्यही बच्चा जन्माउने गुलेली लिएर मात्रै जन्मेका वज्रस्वाँठ हुन । उनी लोकते दाइलाई त्यस्तै व्यवहार गर्थिन् र भन्ने गर्थिन ‘मेरा पोइलाइ राम्रो पनि चाहिन्न, मीठो पनि चाहिन्न, सफासुघर पनि चाहिन्न, नुहाउन पनि पर्दैन, रोपाइँमा होस कि कोदो रोप्दा वा मङ्सिरको धान भित्र्याउँदा होस्, दिउँसो जे लायो राती पनि त्यही लायो सुत्यो ।’
लोग्नेस्वास्नी भएर बेलुकी आधा माना कोदाको झोल पिए मस्त ! अँगालो मारे निदाए । सबैको ओछ्यान एउटै अगेना वरिपरि । चार छोरी र दुई जोइपोइ मझेरीमा सोत्रान । कहिलेकाहीँ म बिहानै पुग्थे लोकते दाइकोमा मेला डाक्न । पुग्दा लोकते मस्तले घुर्दै हुन्थे । पाकु दिदी चाहिँ गाईवस्तुको भकारो सोहोर्दै हुन्थिन् बिचरी । भत्किएको पिँढी भए पनि लिपपोत गर्थिन् । तिनको जाँगर देख्दा अचम्म लाग्थ्यो । ठूली छोरी मालती १४ वर्षको भइसकी । गाउँमा स्कुल त छ नि । तर पढ्न जान मान्दिन । अर्की माइली मुना १३ वर्षकी भइछ । ऊ पनि केही दिन स्कुल गएर छोडेकी । बरु साइली सुकुचाहिँ जान्छे । तीन दिदीबैनी उल्का राम्रा छन् । मिजासका छन । जेठी अगेनामा भात पकाउँछे । माइली बन गएर घास दाउरा गर्छे । साइली सुकु घर धन्दा गर्छे । पानी लिन सिम्लाको पखेरो धाउनुपर्छ । पाकु दिदी र लोकते अहोरात्र अरुको मेला नगए यिनलाई खान पुग्दैन ।
गज्जब छ जिन्दगी ! जसलाई हामी गरिब भन्छौ ती हामीभन्दा धेरै सुखी छन् । खुसी छन् । इमानदार छन् । प्रसन्न छन् । प्रेमिल छन् । लोकते दाइ भन्थे ‘तीन बीस दुई भए भाइ अहिलेसम्म टाउको समेत दुखेको छैन  ।’ लोकते दाइ एउटा सोझा किसान । किसानहरु प्रायः सबै सोझा हुन्छन् । एउटा सानो पराले झुपडी । त्यहीँ पनि बर्खामा चाहिँ अलि अलि पिँढीमा पानी चुहिन्थ्यो । पानीको धारले रातो माटोले लिपपोत गरेको पिँढी खोपिल्टो पार्दासमेत छाउने जाँगर नचलाउने तिनै हुन लोकते दाइ । अरुका हराभरा पार्छन तिनी तर आफ्नै भने छानो चुहिन्छ ।
बच्चालाई पनि पाकु दिदीले छागामा पाइन् । त्यो छागा वरिपरि धेरै हरियो घाँस पाइन्छ । म सधैँ देख्थे पाकु दिदीको ठूलो पेट । जुन दिन पेट घटेको देख्थे अनि सोच्दथेँ ल यिनले बच्चा जन्माइछन्  । के पायौ पाकु दिदी यो पाली भन्थे म । अनि उत्तर आउँथ्यो ‘उही त हो नि ! पोहोर जे पाको यो पाली पनि त्यै ।’ ‘छोरी-छोरी मात्रै पाएर तिमीलाई अब बच्चा नपाऊँ भन्ने लाग्दैन ?’ म सोद्थे तिनलाई । अनि उत्तर जहिले नि रेडिमेट आउँथ्यो खै र तिम्रा लोकते दाइले मानेका ? तिनपाने घिचाहिँसी चाहिँल्न आउँछन् अनि बर्सेनि जन्मिन्छन् राडहरु । मैले हेरेर के हुन्छ र मनु भाइ ?
कुरो सही हो पाकु दिदीको । आइमाईले हेर पनि के होस बरा ।
निरिहता बोकेर पनि हाँस्छिन् तिनी । घाँसको भारिमाथि कति बोकेर ल्याइन तिनले रगत र सालनालसहितको शिशु । रगत मिसिएको घाँस कति खाए होलान् तिनका गाईवस्तुले । खोइ कसरी पाउँछिन होला तिनले एक्लै लेकमा बच्चा ? कसोरी सहन्छिन होला सुत्केरी व्यथा । तिनी रगत लत्पतिएको फाटेको फरिया लगाउँदै शिशुलाई भारीमाथि पटुकिले बेरेर ल्याउँथिन् । ठाउँ–ठाउँमा टालेको फरियाको रङ पनि भिन्नभिन्न देखिन्थ्यो ।
घरमा आएपछि घ्याम्पोमा पीठो हेर्थिन रे । अनि मलखाडीमा लहलह भएको साग मिसाएर खोले पकाउँथिन र मज्जाले खान्थिन् । लोकते बेलुका मेलाबाट फर्केर आउँदा फेरि पनि छोरी नै पाइछ बस यति मात्रै भन्थे रे उनी । जेठी माइली साइलीसम्मको न्वारान गरे तिनले पछि त झन्झट लाग्न थालेछ न न्वारन न पास्नी न सुतक । वर्ष पिछे बैनी थपिएको देखेर ठूली छोरी मालतीलाई पनि दिक्क लाग्न थालेछ ।
हाम्रा बा–आमा सुत्केरी भाको दुई महिना पुगेको हुँदैन तिनपाने पिएर थाल्छन् ठूलीले मेला जाँदा कुरा काटेको लोकते दाइले था पाएछन् । एक दिन अँगेनोमा झोक्राएर बसेको बेलामा भएन हैट अब त लाजै भयो भनेर परिवार नियोजन पो गर्न परो भनेर पाके दिदीसँग सल्लाह मागेछन्
होइन ओइ पाकु ? छोरीले त गाउँभरि हल्ला गरिछ नि
के भनी छ र ?
खै के के भनी रे हाम्रा बा–आमालाई कति चाहिया हो बच्चा रे
ठूलीले भनिकी रे ?
हो के । अब पुग्यो हौ । म भोलि बिहानै हस्पिटल जान्छु
परिवार नियोजन गर्न नि अब किन हुनु
पैसा लग्न होला नि फेरि को सँग दारा ङिच्याउनु र ? लाग्दैन होला ?
अँ तिमीलाई भनेर सित्तैमा गर्दिनन् होलान् नि नियोजन । ए बूढा यो नियोजन भनेको क्या हो हँ ?
खसी पार्नी हो क्या
के भन्नू हुन्छ हौ अहिले तपाईं बोका हो र ! छि के भन्दा हुन्
लौ हेर थाहै रहेनछ यल्लाई ?
अनि के हुन्छ त भन्नुन खसी भएपछि बच्चा हुन्नन् र ?
हुन्नन् क्या हुन्नन् हो र पक्कै हो ? फेरि भयो भने त पैसा फिर्ता माग्न चार्हिँ नि ? के त उसो भ जाम्त पर्सि ? कसैको नि मेला छैन त्यो दिन ? अर्कोपालि चाहिँ छोरा पो हुन्थ्यो कि के था ? कतै भगवान दायिना
पो हुन्छन् कि बूढा । कि एक वर्ष रोकिने हो ?
हैट के भन्छे राड, यहाँ बेइज्जत भइसक्यो आफ्नोल ल भो जानो पर्सि  । खसी भएपछि म भाठा चाहिँ नआउनु
अहिले भन्देछु । तिनपाने पिएसी तिमीलाई सकसक लाग्छ मलाई त के ! आफ्नो विचार
पर्सिपल्ट कसैको मेला थिएन । अलिकति पैसा सापट लिगे गोकर्णसँग र चाहिँले बिहानै लोकते दाइ भद्रटार हस्पिटल । हस्पिटल पुगेसी तिनले भने, ‘म खसी बन्न आएको’ भनेर डाक्टरलाई । डाक्टरले कुरा बुझे र भने श्रीमतीको अनुमति लिनुभाछ ? लिएछु क्यारे भनेछन् । नभन्दै आधा घण्टा अगाडि सम्म लोकते दाइ बोका थिए । आधा घण्टा पछाडि तिनी खसी भए । अघि फटाफट हिँडेर आएको त्यही बाटो अहिले गाह्रो पो लागेछ तिनलाई । घर पुगे । पाकु पनि बूढा कतिबेला आउने हुन खसी भएर भन्दै पिँढीमा झोक्राएर बसिरहेकी थिइन् । लोकते दाइ पुगे । फ्यात्त भैमा बसे । १५ दिन अगाडि लेकमा जन्मेकी शिशु
चिसो भुइँमा लडिरहेकी थिई । खसी बन्नुभयो ? बनेँ नि कति पैसा लाग्यो त कति एक पैसा नि लिएन । अझै डाक्टर भन्दैथे गाउँमा अरु पनि धेरै बच्चा जन्माएर बसेकालाई बोकाहरुलाई सम्झाएर खसी बन्न हस्पिटल जानू भन्दिनु न भलो हुन्छ भन्दै जुस पो ख्वाएर पठाए आम्मै जुस पनि खौदा रैचाहिँन म नि जान्थेँ नि धाप्पिएर घर पुगेका थिए तिनी । अस्ति पारेको बासी मही थियो ठेकीमा सारेर ल्याई पाकुले । एक कचौरी मही पिएसी अमिलो डकार्दै लागे सिम्लाको पखेरामा एक डोको घाँस ल्याउँछु भन्दै । सरल मान्छेको सरल जिन्दगी जस्तो त्यही घरमुनि बगिरहेको स्याल्पिङ्गे खोलाझैं बगिरहेको थियो । स्याल्पिङ्गे आफ्नै गतिमा बग्न थालेको सदियौ भयो एकतमासले बगिरहेको छ मैले देखेदेखि त्यो त्यस्तै छ । त्यो कहिले रोकिएन । मैले थापाएदेखि ती लोकते दाइको जिन्दगी पनि त्यतिकै एकनासले बगिरहेछ । परिवार नियोजन लाई खसी पार्ने भन्थे गाउँमा । गाउँले एक अर्कालाई सबैलाई थाहा छ को–को खसी भएको छ भनेर । गाउँमा सबको हिसाबकिताब एकले अर्काको राखेको हुन्छ ।
लोकते खसी बनेर आएको पनि गाउँमा एकाएक हल्ला फैलियो ।
स्वारथोकका जगमान बूढा भन्दै थिए अलिक दिन लोकतेलाई काममा नलगाउनु खसी भएर आएपछि एक हप्तासम्म आराम गर्न दिनुपर्छ । बाँसकोटेको रामबहादुर भन्दै थिए । बिचरो घरमा खाने अन्न त छैन के खाएर तंग्रोस् । पारथोकका पाठक कान्छाले पनि था पाएछन् र बोल्दै थिए, एक माना घ्यू खानुपर्छ लोकते अब पहिलाको जस्तै हुनलाई  । खोप्राबारी जेठा बा पनि बोल्दै थिए मैले पनि अप्रेसन गरेपछि दुई हप्ता आराम गरेको । मीठो नखति कुरा खानुपर्छ अब अलिक दिन लोकतेले  । हरेक दिन मेलामा यही कुरा सुनिन्थ्यो ।
मलाई अचम्म यसमा लागिरहेको थियो कि हरेक वर्ष पाकु दिदीले लेकमा घाँस जाँदा बच्चा पाएर ल्याउँथिन् कसैले भन्दैनथे यिनी सुत्केरी बा, यिनले आराम गर्नुपर्छ । यिनी कमजोरी छिन् यिनले केही हप्ता ताकतिलो कुरा खाएर घरमा बस्नुपर्छ भनेर तर अहिले एउटा सामान्य परिवार नियोजन गरेर आएको लोकतेलाई यत्रो ख्याल राख्छन् गाउँलेले । यो विभेद किन ? स्त्रीको ज्यान होइन र ? मलाई अचम्म लाग्थ्यो किन नारी र पुरुषमा यो विभेद !
सुत्केरी हुँदा कति रात अलौटा मकै खाएर सुतिन् पाकु दिदी ।
सालनाल र शिशु पटुकिमा पोको पारेर फेदीगाउँबाट झर्थिन् घाँस बोक्तै पाकु दिदी । कसैले सोध्दैैनथे तिनलाई एक माना चामल लगेर पेटभरि भात पकाएर खाऊँ भनेर। तर आज लोकते खसी भएर आउँदा चाहिँ यत्रो सोधिनिधि !
गाउँलेको करकापले लोकते दाइ केही दिन मेला गएनन्  ।
छोरीहरु पनि खुसी भए कि अब आमाले अर्को बैनी पाउदिनन् भनेर । तिनले भाइको आशा कहिले राखेनन् । जेठी मालतीले सोच्दै थिई कि मैले बाउको कुरा काटेर ठिक गरिछु । कमसे कम बुढाले परिवार नियोजन त गरेर आए । छोरीहरुले देखेका थिए हरेक रात आमाको सुत्केरी कन्तबिजोग । तिनीहरूले भोगेका थिए तिनपाने पिएपछि बाउ र आमाको हर्कत । अब त अप्रेसन भयो तिनपाने पिए पनि बाउले त्यस्तो हरकत नगर्लान र फेरि फेरि आमा सुत्केरी नहोलिन ।
एउटा सुखी परिवार दुःखी परिवारमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको ती छोरीहरूले महसुस गर्न थालिसकेका थिए । जेठी मालती पन्ध्र पूरा पुगेर सोह्र वर्ष लागिसकेकी थिई । गरिब नै भए पनि ज्याला गरेर लोकतेले छोरीहरूलाई भोकै चाहिँ कहिले राखेका थिएनन् । खोले नै खाए पनि पुस्ट थिए नानीहरू । भात खाने साहुका छोरीहरु भन्दा ज्याला गरेर खोले खाने लोकतेका छोरीहरु असाध्य रसिला भरिला थिए । यही भन्थे गाउँले पनि । मेला गाका ठाउँमा गाउँका अल्लारे ठिटाहरुले जिस्क्याउन सुरु गरिसकेका थिए मालतीलाइ । लोकते र पाकुको जिम्मेवारी दिन प्रतिदिन थपिरहेको थियो ।
सबैभन्दा दुःखको कुरो त भन्नै बाँकी छ मैले । पाकु दिदी फेरि दुई जिउकी भइन् । छोरीहरूमा निराशा छाउन थाल्यो । गाउँलेले मेलापातमा हल्लिखल्ली बनाए लोकतेले अप्रेसन गरेको छ पाकुले फेरि भुँडी बोकी  । भुँडी त बोकी तर कसको भुँडी बोकी । भुँडी त यसै बोकिदैन । बोकाइदिने अरु कोही बोका हुनुपर्छ । त्यो बोकाको खोजी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यो गाउँलेले । पाकुको श्रम, मजदुरी, पसिना, ज्याला, भोक, रोग इमानदारिता र अहिलेसम्मकै सोझोपनको कसैले मूल्यांकन गरेन । तर जब लोकतेले अप्रेसन गरिसकेपछि पाकुले पेट बोकी गाउँलेको निद हराम भयो । छोरीहरूलाई छेड्ने काम हुन थाल्यो । मालती तेरी आमाले कसको पाप बोकी थाहा होला भन्न ? मेलामा मालतीलाई यसरी गाउँले हरेक दिन केरकार गर्न थाले
मालती रुन मात्रै सकेकी छैन । ऊ घरमा आमासँग पनि बोल्दिन । बाउसँग पनि बोल्दिन । बैनीहरुसँग पनि बोल्दिन । आमाको मुख पनि हेर्न छोडेर गाई गोठमा गएर एक्लै सुत्न थाली ।
मङ्सिरको धान काट्ने बेला थियो । बाउ मेला गएको ठाउँमा मालती जान्न थिई । ऊ अर्कैकोमा जान्थी । लोकतेलाई गाउँलेले फ्याउ फ्याउथी पार्न थालेका थिए लोकु तेरी बूढीले फेरि पेट बोकी रहस्य के हो ? । गाउँलेले सिधै भन्न सकेका थिएनन् । घुमाउरो पाराले कुरा धुत्न खोज्थे । पाकु र लोकते अब सँगै मेला हिंड्न छोडे । दुवै अलग–अलग ।
एकदिन ममालती निहुरेर धान काटिरहेको बेलामा सुनखानी गाउँको समर सिँहको नातीले जिस्क्यायो ।
ओई मालती मसँग बिहे गर्छेस् !
के थात मलाई !
मालती लजाई । हुन्छ पनि भनिन । हुन्न पनि भनिन । बिहे उसको बसको कुरो पनि थिएन । मालती जता जता मेला जान्थी उतै उतै धाउन थाल्यो समर सिंहको नाति लालसिङ पनि । केटो खाइलाग्दो थियो । लरक्क परेको । जातचाहिँ नमिल्ने । मालतीलाई दिन पछ्यायो लालसिङले । अन्ततः पगाल्यो ।
मेला सकिएपछि उनीहरू अधेरी दोभानको पाटिमा बसेर गफ गर्थे । जोडी चाहिँ मिल्थ्यो लालसिङ र मालतीको । सलक्क बढेको । घोर्ले बोको जस्तो थियो तामाङको छोरो  । हामी जिस्काउँदा चाहिँ लालसिङ्गे भन्थ्यौँ उसलाई । सुनखानी बछला प्राविमा सँगै पढेको । मालती पनि सानोमा बछला प्राविमा दुई चाहिँ चार महिना पढ्न गकि रैछ ।
केही दिनदेखि मालतीलाइ निद्रा आएको छैन । घरमा था छैन कसैलाई पनि । एक दुई चाहिँ माइली बैनीले सोधेकी थिई उसको उदासीपन तर केही बोलेकी थिन मालती । उ बेग्लै सुत्छे गाई गोठमा । आमाप्रति नकारात्मक छे । बाउले परिवार नियोजन गर्नु अनि आमाले पेट बोक्नु, यो कुराले उसको मन खाइरहेको थियो । अरुको दुःखमा हास्ने । गाउँका हुर्केका जिस्काउने । धारोमा गाग्री राखेर घन्टौ बिताउने । तरकारी पकाएकोदेखि जोइपोइ सुतेका, कोपरादेखि थालसम्मका गफ गर्छन पधेर्नीहरु ।
लाल सिंहले फकाएछ तर मालतीलाई भने एउटा चाहिथ्यो । आमाले इज्जत फालेकी नै भए पनि भाइबहिनीको भविष्य के होला भन्ने । लाल सिङसँग भागेर जाने निधो त गरी तर यस्ती आमा कि छोरी पोइल नगए के गर्छे त ! भनेर फेरि तिनै गाउँलेले कुरा काट्न थाल्छन भोलि मेलापातमा । के गर्नु के नगर्नु दोधारमा परि मालती । १६ वर्षको बैंसालु यो उमेरमा उसलाई पनि लाउलाउ खाउखाउ रमाइलो गरु भन्ने चाहिँ हुन्छ नै । एउटा आफ्नो कोहि केटा साथी होइदेओस भन्न हुन्छ सोह्र सत्र लागेका बैंसालु युवतीहरुलाई । ऊ चाहन्थी आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार होस् । उ चाहन्थी बुढो भइसकेका बाबु त्यहाँमाथि पनि अप्रेसन गरिसकेकालाई कति ज्याला मजदुरी गर्न पठाउनु ।
एकिदन पाकु अगेनामा सानी बैनीलाई तातो पार्दिदै झोक्राएर बसिरहेकी थिई । यो दृश्यले मालतीको आमा प्रतिको स्नेह उर्लियो। उस्ले मनमनै सोची । ह्या म पनि किन बेफ्ँवाकमा
आफ्नै आमाप्रति पाप नचिताऊँ । न बाबाले अप्रेसन गरी भनेर यतिकै ढाटेका पो हुन कि के था लोग्नेमान्छेको जात हो नि ? आमाप्रति न कतै घोर अन्याय पो भा छ कि के था ? म त अलिकति बुझेकी दुई चार अक्षर पढेकी छोरी पो त । छोरी नजिक आएर बसेकीले पाकुले पनि हेरि पुलुक्क । आमा छोरीको लामो गन्थन भयो ।
अब भने आमाप्रतिको उसको विश्वास बढ्यो । भरे बेलुकी बाउ मेलाबाट आएपछि सोधपुछ गर्ने निधो गरी मालतीले ।
बेलुकी भयो । बा मेलाबाट आए । थाकेर आएका लोकते दाइ परालको पुरानो चाहिँ कटी ओछ्याएर अँगेनो छेउमा बसे । सिल्बरको कसौंडीमा भात छड्किदै थ्यो ।
हैन बा तपाईंले अप्रेसन त गर्नुभएको हो ?
हो नि किन सोधेकी ?
अनि आमाको यो हालत किन त फेरि ?
छोरी मान्छे भएर तँलाई यस्ता कुरा सोध्न लाज लागेन ? यहाँ गरिबीको कारण प्रतिदिन अरुसँग मागी खान लाज भएन
अनि मैले आमाको यो हालबारे सोधपुछ गर्न केको लाज बा ? सोध्न तेरी आमालाई मलाई मात्रै के सोध्छेस् सोधेँ त मैले आमालाई पनि ? के भन्छे त ?
विचारी आमाको केही दोष छैन चुरो कुरो पत्ता लागेन । आमाको पनि गल्ती छैन । बाको पनि गल्ती छैन । आखिर दोष कसको थियो त ? मालती अवाक भइरहेकी थिई । समस्या सुल्झाउन सकिएको थिएन । गरिबीका कारण काम छोडेर कतै हिँड्ने कुरा पनि भएन । एकदिन लालसिङ पाकुको घरमा आयो र मालतीको हात माग्यो । लोकते लाई केही पैसा दिएर भए पनि फकाउने निर्णय ग¥यो उसले। पाकु र लोकते एकै भए । जात मिल्दैन । कसरी सरासर थापाकी छोरी तामाङलाई दिनु यो कुरा गर्न मिल्दैन भनी पाकुले । लालसिंहले फकाउँदै भन्यो यो घरको समस्या मेरो समस्या हो । भन्नुन बरु म हजुरहरुलाई ऋण तिर्न मद्दत गर्छु र बिहे गर्दा चाहिँ पनि गर्न लगाउँदिन । मालती मलाई मन प-र्यो अनि ऊ पनि मलाई मन पराउँछे पाकुलाई पनि आशा लाग्यो कि गजमाने साहुको ऋण तिर्न पाए त मुक्ति मिल्ने थ्यो भनेर । मालतीलाई एकिदन एकान्तमा बोलाएर सोधपुछ गरी पाकुले कि उसलाई लालसिङ मन परेको छ त? मालतीले भनी आमा लालसिङ कस्तो मनकारी छ तपाईंहरुलाई के थाहा ? त्यतिको केटा भए मलाई हुन्छ र अनि कुरो रह्यो जातको । माथि आघेटारको सरु पनि त पुडी गाउँको श्याम सुन्दर परियारसँग पोइल गएकी हो नि खै अहिले सरु घर माइति गरिराकी छे त ! झन लाल सिंहले हाम्रो व्यवहार पनि मिलाइदिन्छु भनेका छन् नि ।
के कति लेनदेनको कुरा भयो कुन्नी अब लाल सिंहसँग मालती बिहे गर्ने भई । पैसाकै कारण पाकु र लोकते मिले । बिहे त खास के हो र एकिदन आफ्नो लुगाफाटो बोकेर मालती लाल सिंहको घर गई । बैनीहरुले धेरै दुःख माने कि दिदी बिहे नै नगरी लाल सिंहसँग गई भनेर । केही दिन घरमा शून्यता छायो । ‘टीकाटालोसम्म भनेनि गर्नुपर्थ्यो नि बिचारीको । त्यतिकै पैसा लिएर लाल सिंहलाई जिम्मा लाएछन् लोकतेका बूढाबूढीले आफ्नी छोरी आखिर फेरि गाउँलेले भन्नी कुरा पाए । सबैभन्दा ज्ञानी छोरी, आफूलाई सघाउने छोरी, हुर्केकी छोरी मालती अब पराइ घरमा गई । गच्छेअनुसारको बिहे त गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन नसके पनि नारायण पूजा मात्रै भए पनि पुजेर दिनुपर्ने थियो । यो कुराले पाकुको दिल बहुतै दुःखी थियो । गरिबी भनेको मान्छेको विवशताको घाउ रहेछ यही कुराको बोध भयो उसलाई । (आर्थिक दैनिकबाट)